WOWOW किचन नल एकल ह्यान्डल पुल डाउन स्प्रेयरको साथ - सर्वश्रेष्ठ किचन नल 2021 | सर्वश्रेष्ठ बाथरूम नल | WOWOW नल
घर / भान्साको नल / किचनको नलहरू तान्नुहोस् / WOWOW भान्साका नल एकल ह्यान्डल पुल डाउन स्प्रेयरको साथ
WOWOW किचन नल एकल ह्यान्डल पुल डाउन स्प्रेयरको साथ
हटाउन योग्य नुहाउने टाउकोको साथ, किचनको पानी मिक्सर ट्याप नियन्त्रण गर्न सजिलो छ। यसको सिरेमिक कार्ट्रिजलाई धन्यवाद, यस उत्पादनले पानी र चुहावट र पानीको तापमानलाई सही नियन्त्रणको बिना दीर्घकालीन प्रयोगको सुनिश्चित गर्दछ।
2311601C स्थापना निर्देशन
क्रोम किचन सिंक नल तल तान्नुहोस् 2311601C
के तपाईं घर र बारहरू र भान्छाको रेस्टुरेन्ट दुवैमा उत्तम प्रदर्शन गर्ने एक उच्च-अन्तको क्रोम किचन सिink्क नल तान्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अब खोज्नुहोस्! WOWOW ले एक क्रोम किचन सिंक नल पुल डाउन कपडा गर्न प्रबन्धित गरेको छ कि शीर्ष-लिग प्रदर्शन प्रदान गर्दछ, कठोर र मांगको अवस्थाको बेला पनि। जैसा कि तपाई छवि बनाउन सक्नुहुनेछ, रेष्टुरेन्टहरू र बारहरू जस्ता व्यावसायिक साइटहरूमा, प्रत्येक एकल कर्मचारी उच्च गतिमा काम गर्दैछ। यसको मतलब यो होइन कि भान्साकोठा वा बार उपकरणहरू स्टाफ सदस्यहरूले स्वादिष्टताका साथ व्यवहार गर्छन्। यही कारणले कि वाणिज्यिक भान्सा सिink्क नलहरू १००% प्रतिरोधात्मक हुनुपर्दछ, जुन सबै समयमा १००% प्रदर्शन प्रदान गर्दछ, अझ बढी तनावपूर्ण क्षणहरूमा।
बार र रेस्टुरेन्ट मालिकहरू प्राय: भान्साकोठामा सिन्क नलहरू तान्न चयन गर्दछन्, किनकि ती दुबै व्यावहारिक र कार्यात्मक हुन्। तिनीहरू कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सक्छन् र नजिकको भान्साको सिink्क। यहाँसम्म कि यसको विशाल भान्साको डुब्ने रेस्टुरेन्टहरूमा पनि, किचन सि s्कको नल तान्नको लागि कुनै ठाउँ वा ठाउँ सफा गर्न सकिन्छ। विशेष गरी व्यावसायिक किचन सिink्क नलका लागि अत्यधिक माग गरिएको एक सुविधा, यो हो कि स्प्रे टाउको आफ्नो मूल स्थितिमा फिर्ता लिन्छ। र प्राथमिकता स्वचालित रूपमा एक चुम्बकीय डकि lose स्टेशन द्वारा कुनै पनि मूल्यवान समय गुमाउन। कुनै चीजको लागि होइन WOWOW को क्रोम किचन सि s्क नल तान्न दुबै रेष्टुरेन्टहरू र घरका भान्सा दुबैहरूमा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।
भान्साको सिink्क नलको गुणस्तर मा तल झार्दछ
क्रोम किचन सिंक नल पुल डाउन WOWOW BSCI, सीई, UPC, र आईएसओ 9001 अन्तर्गत प्रमाणित छ। यो प्रमाणित गर्छ WOWOW ले गुणवत्तालाई गम्भीरताका साथ लिन्छ र केहि पूरा गर्न र उद्योग मापदण्ड पार गर्न सबै गर्छ। अपेक्षा भन्दा बढी उद्देश्य हो। WOWOW ले केवल उच्च-ग्रेड सामग्रीहरू जस्तै उच्च घनत्व काँसा र स्टेनलेस स्टील प्रयोग गर्दछ। यसैले टिकाउ र प्रतिरोध सुनिश्चित गरिएको छ। भान्साको सिink्क नल शरीर जिन्क मिश्रबाट बनेको हुन्छ, नल कोर विशाल पीतलबाट बनेको हुन्छ र टाउको स्टेनलेस स्टीलको बनावटी हो। यी सामग्रीले एक उच्च प्रदर्शन भान्साको सिink्क नलको ग्यारेन्टी गर्दछ जुन टिकाऊ, ड्रिप रहित, सीसा-रहित र विरोधी विस्फोट हो।
WOWOW को क्रोम किचन सिंक नल तान्न एक चुंबकीय डकिking स्टेशन सुविधा प्रदान गर्दछ जुन सधैं भेट्छ र तपाइँको अपेक्षाहरू भन्दा बढि हुन्छ। स्प्रे हेड सधैं सहि स्थितिमा हुन्छ, लामो अवधि पछि पनि। यो चुम्बकीय डकि station स्टेशन १०,००० पटक परीक्षण गरिएको छ। यस्तो देखिन्छ कि यी सबै परीक्षणहरू पछि, भित्र-निर्मित चुम्बकले अझै स्प्रे टाउको ठीक बाहिर तान्न पछि यसलाई स्थिति राख्न सक्छ।
लागत कुशल क्रोम किचन सिंक नल तल तान्न
न केवल WOWOW को क्रोम किचन सिink्क नललाई किन्नको लागि अत्यधिक किफायती तल तानिन्छ, यसको पानीको उपयोगको सन्दर्भमा यो लागत पनि कुशल छ। यसको नवीन Neoperl Aerator को कारणले, पानीको मूल यसको उपयोगको %०% मा कम गरिएको छ। यो निओपरल एरेटर पनि प्रमाणित छ, र लामो समयको लागि यसको उद्देश्य सेवा गर्दछ। यसले स्मार्ट तरिकाले पानीको बहावलाई कम गर्दछ, त्यसैले तपाईले याद पनि गर्नुहुने छैन कि कम पानी प्रयोग भएको छ। अझ राम्रो सफा गर्नको लागि पानीलाई केवल उच्च दबाबका साथ सेवा दिइन्छ, अभिनव नियोपरल एरेटर पानी घटाउने उपकरण बिना। र द्वारा by०% घटाइएको पानी बिलको परिणामस्वरूप! यसले प्रमाण दिन्छ कि WOWOW ले नवीनता र पानीको खपतलाई गम्भीरताका साथ लिन्छ। यदि प्राथमिकता दिइएको छ भने, निओपरल एबीएस एरेटर केवल एक सिक्का द्वारा हटाउन सकिन्छ। या त प्रतिस्थापन र यसलाई सफा गर्न, वा WOWOW को क्रोम किचेन सि s्क नल तल तान्न पानीको पूर्ण दबाव प्रयोग गर्न।
जे भए पनि, क्रोम किचन सिन्क नलको तान्नको मूल्य खरीद धेरै सस्तो छ। WOWOW ले तपाईंलाई पैसाको लागि उत्तम मूल्य प्रस्ताव गर्दछ जब तपाईं कम्पनीले प्रदान गरिरहेको गुणवत्तामा हेर्नुहुन्छ। यसको उत्पादन प्रक्रिया अत्यधिक स्वचालित र सटीक छ। यस तरिकाले WOWOW ले धेरै लागतहरू बचत गर्दछ, र अझै गुणस्तरीय उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ जुन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ वा A- ब्रान्डको किचन सिink्क नललाई पनि परम्परा गर्न सक्छ। WOWOW को क्रोम किचनको सि f्क नल तान्नका लागि बजेट किचेन्सका लागि सस्तो पनि हुन्छ। यसको लागत प्रभावी गुणवत्ता र आधुनिक उपस्थितिको साथ, WOWOW निश्चित रूपमा बजारमा सबै भन्दा राम्रो विकल्पको रूपमा प्रमाणित हुन्छ।
डिजाइन क्रोम किचन सिंक नल तान्न
जबकि WOWOW को भान्साको सिink्क नल पनि बजेटको भान्छामा फिट हुने देखिन्छ, यसको मतलब यो होइन कि WOWOW शैली, डिजाइन र कार्यक्षमतामा सम्झौता गरेको छ। यसको विपरित! यो क्रोम किचन सिंक नल पुल डाउन ध्यानपूर्वक डिजाइन गरिएको थियो र तपाइँको भान्छामा ग्लैमरस लुक थप गर्दछ। उच्च चाप डिजाइन एक सुरुचिपूर्ण हंस जस्तो देखिन्छ र ह्यान्डल निर्भय रूपमा चिकनी घटता संग डिजाइन गरीएको थियो। स्प्रे हेड यसको समकालीन डिजाइन पनि योगदान गर्दछ।
कार्यक्षमताहरूको सन्दर्भमा, क्रोम किचन सिंक नल पुल डाउनले water पानी मोडहरू प्रदान गर्दछ: स्वीप, स्ट्रिम र स्प्रे। अनौंठो स्वीप मोडको साथ, पानीलाई एक्वा ब्लेडको रूपमा मजबुत रूपमा फोहोर पदार्थहरू कुल्काइन्छ र भान्साको डुब्न छिटो र दृढ रूपमा जोडिन्छ। शक्तिशाली प्रवाह मोड कम पानीको चापको लागि अधिक उपयुक्त छ, उदाहरणको लागि जब तपाईं तरकारीहरू धुदै हुनुहुन्छ र तिनीहरूलाई नोक्सान गर्न चाहनुहुन्न। अन्तमा, स्प्रे मोडको साथ तपाईले छोटो समयमा पानीले भाँडा भर्न सक्नुहुनेछ।
क्रोम किचन सिंकको नल तान्नको परिचालन उत्कृष्टता
एकल-ह्यान्डललाई अपनाउने र स्प्रे डाउन डाउन, WOWOW को क्रोम किचन सि s्क नल तान्न निश्चित रूपले संचालन गर्न सजिलो छ। यसका साथै 360 XNUMX० डिग्री रोटेशन स्प्रे हेडले तपाईंलाई तपाईंको काम अझ सजिलोसँग गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईं दुवै समय र प्रयास बचत गर्न। नली बाहिर तान्न एक सहज फिर्ता प्रक्रिया प्रदान गर्दछ। यो एकल प्वाल क्रोम किचनको सिink्क नल तान्नका लागि यसको कारण यसको सुविधाजनक अपरेसनको कारण खडा हुन्छ।
अन्तमा, क्रोम किचन सिंक नल पुल डाउन स्थापना गर्न सजिलो छ। यो एकल-ह्यान्डल उच्च चापको किचन सिink्क नल या त १ वा hole प्वाल भान्साको डेक फिट गर्न डिजाइन गरिएको थियो। तपाईंले पूर्वानुमानित प्वालहरूको कारण एस्सेटिक समस्याहरूको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन, किनकि WOWOW ले कुनै प्वालहरू ढाक्न मेटल डेक प्लेट प्रदान गर्दछ। WOWOW ले सबै स्थापना सामाग्रीहरू पनि प्रदान गर्दछ जुन तपाईंले यो क्रोम किचन सिन्क नललाई तल तान्न आवश्यक पर्दछ, ग्लोभ्स, टेफ्लन टेप र उपकरणहरू सहित। यस WOWOW भान्सा सिink्क नल को स्थापना यसैले एक हावा जस्तै जान्छ!
क्रोम किचन सिन्क नलका फाइदा संक्षेपमा तल पुग्नुहोस्:
Stylish बोल्ड स्टाइलिश डिजाइन
 चुम्बकीय पुल-आउट स्प्रे हेड
 तीन स्प्रेइ functions कार्यहरू
SKU: 2311601 XNUMX१C विभाग: भान्साको नल, किचनको नलहरू तान्नुहोस् टैग: एकल हैंडल, सिंक मिक्सर ट्यापहरू, स्टेनलेस स्टील